We Fight We Win. -- " More than Media ": အမေရိကန် အစိုးရ က မြန်မာ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ် နှစ်ခု အပေါ် ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှု မှ ရုပ်သိမ်း
အမေရိကန် အစိုးရ က မြန်မာ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ် နှစ်ခု အပေါ် ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှု မှ ရုပ်သိမ်း
၂၁ ရာစု ဘဏ်စနစ် ကို အမှီလိုက်တော့ မည့် မြန်မာဘဏ်များ အတွင်း လက်ရှိ လုပ်ငန်း အခြေအနေ
၁၉၉၄ ခုနှစ် ဇွန်လ က စတင် တည်ထောင်ခဲ့သော မြန်မာ မေဖလားဝါး ( Myanmar Mayflower Bank ) ဘဏ် နှင့် အေရှဓနဘဏ် (Asia Wealth Bank) နှစ်ဘဏ် ကို တရားမ၀င်ငွေကြေး လုပ်ငန်းများ၊ ငွေကြေးခ၀ါချမှု (ငွေမဲမှ ငွေဖြူသို့ ပြောင်းလဲခြင်း) ကြောင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၂ ရက် နေ့ မှာ အမေရိကန်အစိုးရ က ဒဏ်ခတ်အရေးယူခဲ့တယ်။ ဒီလို မြန်မာ့ဘဏ်ကြီး နှစ် ခု အပေါ် အရေးယူထားမှု ကို အမေရိကန် အစိုးရ က ဒီကနေ့ ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မေဖလားဝါး ဘဏ်နှင့် အာရှဓန ဘဏ်တို့သည် မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ ရရှိသည့် တရားမ၀င် ငွေကြေး များကို ခ၀ါချမှု ပြုလုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲချက်များ ထွက်ပေါ်လာသည့် နောက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရက မေဖလားဝါး ဘဏ်၊ အာရှ ဓန ဘဏ်တို့ကို လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန် အဲဝေး လေကြောင်းလိုင်း၏ မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်သော ဦးအိုက်ဟော့သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်က တရားမ၀င် ငွေကြေး ခ၀ါချမှု ပြုလုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ ရသည့် မြန်မာမေဖလားဝါးဘဏ်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူ တဦးဖြစ်သည်။
WASHINGTON – The U.S. Department of the Treasury today announced that the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is repealingafinal rule adopted on April 12, 2004 that required certain U.S. financial institutions to take special measures directed at two of Burma’s then-largest banks, Myanmar Mayflower Bank and Asia Wealth Bank.
FinCEN today is also withdrawing its November 18, 2003 identification of these banks as financial institutions of primary money laundering concern. These actions were taken under Section 311 of the USA PATRIOT Act.
When the final rule was issued, Myanmar Mayflower Bank and Asia Wealth Bank had been identified as financial institutions of primary money laundering concern, and individuals owning and controlling both banks were determined to be linked with illicit financial activities.